Fiangonana Shine Tsy manohana kandida ho filoham-pirenena
Fahatongavan'ny Papa François Ny Eveka miantoka ny vola fa an’ny fanjakana ny filaminana
Vonona hiantoka ny fandriampahalemana ny fanjakana. Nisava kosa ny ahiahy sy ny fireharehana.
Toy ny fanaony isan-taona dia hikarakara ilay hetsika antsoina hoe 7 alahady indray ry zareo avy eo anivon’ny fiangonana ara-pilazantsara Shine.
Ny alahady 16 - 28 septambra moa izany, raha ny fanazavana tetsy amin’ny hotely Colbert Antaninarenina. Hotontosaina etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina izy io, ho an’Antananarivo. Ny 23 septambra kosa ho an’ny any amin’ny faritra. Hanehoana fa mbola miasa Andriamanitra no tanjona, hoy izy ireo, ary hisy fahagagana sy fijoroana vavolombelona hanehoana izany. Mikasika ny filazana fa misy kandida ho filoham-pirenena tohanan’ireo fiangonana zandriny moa dia nanambara ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ity fiangonana ity fa tsy manana kandida tohanana raha ny fiangonana Shine manokana. Manabe ny olona hifidy izahay, hoy ny Pasitera Patrick Andrianarivo, saingy tsy miditra amin’ny resaka politika kosa ny fiangonana.